နိုဝငျဘာ 1, 2018 – Healthy Life Journal
ရင်သားကင်ဆာ အဆင့်(၄) လွတ်မြောက်လာပုံကို အဆိုတော် မီးမီးခဲ ဗီဒီယိုဖြင့် မျှဝေထား
♦ ဇွန်ခိုင်ဦး(ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့ က ရင်သားကင်ဆာဖြစ်မှန်း သိရှိခဲ့သည့် အဆို တော်မီးမီးခဲက သူ၏ အဆင့်(၄) ရင်သားကင်ဆာကို ကျော်လွှားခဲ့ပုံအား ၂၀၁၈ ၉ လပိုင်းက ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့် ယခုလို မျှဝေထားသည်။...
မိသားစုဝင် ၁၄ ယောက်လုံး၌ ခြေ ၆ ချောင်း၊ လက် ၆ ချောင်းပါသည့် ဒီဆီးလ်ဗားမိသားစု
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ မိဘအများစုက သူတို့ရဲ့သားသမီးမှာ မွေးရာပါ အပိုလက်ချောင်း၊ ခြေချောင်းပါလာရင် ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုလို့ ယူဆကြပေမယ့် ဘရာဇီးနိုင်ငံမှ ဒီဆီးလ်ဗားမိသားစုဝင်တွေကတော့ ဒီလိုမယူဆကြပါဘူး။ သူတို့မိသားစုဝင် ၁၄ ယောက်မှာ လက်ချောင်း၊ ခြေချောင်း ၆ ချောင်းစီရှိကြပြီး ဒါကို အားသာချက်အဖြစ်...
ဗိုက်ထဲကကလေး ကန်ချက်ပြင်းသဖြင့် သားအိမ်ပေါက်သွားသည့် အမျိုးသမီး
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ တရုတ်နိုင်ငံမှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ဗိုက်ထဲကကလေး ကန်ချက်ပြင်းတာကြောင့် ကလေးရဲ့ခြေထောက်ဟာ သားအိမ်အပြင်ဘက် ပေါက်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အပြင်းအထန် ဗိုက်နာတာကြောင့် အဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ ဆေးရုံတက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေက ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန်စစ်ဆေးခဲ့ကြပြီး သန္ဓေသားကန်တာကြောင့် သားအိမ်နံရံ စုတ်ပြဲသွားတာကို အံသြဖွယ်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ပိုးဝင်တာ၊ သွေးလွန်တာ၊...
မျက်ခွံရောင်၍ ဖြစ်သော အဖုငယ် (Chalazion)
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း မေး. မျက်ခွံမှာအဖုပေါက်ခြင်း (Chalazion) က ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ လဲဆရာ။ ဖြေ. Chalazion လို့ခေါ်တဲ့ မျက်စိမှာ အဖုပေါက်တာက မျက်ခွံ (Eyelid)မှာပဲဖြစ်တာပါ။ မျက်ခွံဟာ မာမာတင်းတင်းဖြစ်နေဖို့ Tansal Plate ဆိုတာရှိပါတယ်။ အဲဒီ Tansal...